Họtelu Centara: Họtelu ọhụụ atọ na Laos
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Laos njem akụkọ » Họtelu Centara: Họtelu ọhụụ atọ na Laos
Centara Hotels & Resorts, r, kwuputara na ọ bịanyela aka na nkwekọrịta njikwa maka ihe ọhụrụ atọ nwere ngụkọta nke igodo 216, yana Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd (AIDC), ụlọ ọrụ guzobere na Laos.
Na saịtị UNESCO World Heritage saịtị nke Luang Prabang, Centara na-ezube imeghe elu elu Centara Grand Luang Prabang na midscale Centra site na ihe onwunwe Centara, ma n'akụkụ etiti obodo ahụ. Akụ nke atọ ga-anọ n'okpuru akara ọhụụ ọhụụ nke Centara, COSI, na-elekọta ngalaba na-eto eto nke ndị njem nwere nnwere onwe. Ọ ga - anọchite anya onyinye pụrụ iche na Vientiane, isi obodo Laotian.
Nkwekọrịta njikwa na-abịa dịka Laos na-ebupụta nnukwu atụmatụ ọhụrụ iji kwalite njem. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, gọọmentị nke Lao PDR abịawo na-ele ndị njem anya dị ka ngalaba kachasị mkpa maka ịkwalite mmepe mmekọrịta akụ na ụba na akụ na ụba. Ọ na-atụ anya na ọ ga-adọta ndị ọbịa 5 nde na 2018 na ọnụọgụ na-arịwanye elu na afọ ndị na-abịa n'ihu na mkpọsa Gị Laos n'okpuru slogan "Nanị Mara Mma." Ndị ọbịa Thai, China na Western na-achọpụta ugwu ndị mara mma nke obodo ahụ, obodo ndị nwere ihu igwe, na ịdị umeala n'obi dị umeala n'obi. Ma o nwere otu ihe kachasị na ihu ọma ya: uru dị oke mma. Dabere na akụkọ ọhụrụ sitere na World Economic Forum dabeere na Switzerland, Laos nọ 14th n'etiti mba 136 na asọmpi ego.
"Mmekọrịta a na AIDC bụ nnukwu ohere iji gbasaa akara anyị banye na mba pụrụ iche," kwuru Onye isi ụlọ ọrụ Centara Thirayuth Chirathivat. "Laos dị na ndepụta nke ọtụtụ ndị njem na mpaghara a, anyị chọrọ ijere ha ozi ebe obibi dị iche iche dịgasị iche iche iji kwekọọ na ahụmịhe njem ha na-achọ."
Luang Prabang bụ onye echekwara nke ọma, obodo ime mmụọ ochie na njikọta nke osimiri Khan na Mekong. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ nke ọma na ọdụ ụgbọ elu ya na ihe eji enyere ndụ aka ọgbara ọhụrụ, ọ na-ebi ndụ kwekọrọ na ọnọdụ ya na World Heritage yana ụlọ arụsị mara mma na ndụ osimiri. Bgba ígwè karịrị ụgbọala. Baguettes na-atọ ụtọ, croissants, ụlọ oriri na ọ restaurantsụéụ na ụlọ oriri na ọ Frenchụ hụ ndị France na-egosi na akụkọ ọchịchị French na Luang Prabang na Vientiane.
Pheutsapha Phoummasak, Onye isi oche nke AIDC Laos kwuru “Anyị nwere obi ụtọ iso Centara rụkọọ ọrụ iji weta ụdị ndị ha tụkwasịrị obi n’obodo ukwu ndị a ma kwalitekwu ikike njegharị nke Laos. Luang Prabang na Vientiane bụ ebe ama ama maka ndị njem Thai na ndị mba ụwa n'ihi ngwakọ nke akụkọ ntolite zuru oke, ọmarịcha mma na agwa mara mma ”
Hotelslọ nkwari akụ ọhụrụ ndị a bụ ihe akaebe kachasị ọhụrụ nke atụmatụ mgbasawanye nke Centara, nke na-achọ ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke ihe onwunwe n'okpuru njikwa ya n'ime afọ ise sochirinụ. Ọganihu ọhụrụ a ga - ahụ ọnụ ọgụgụ ụlọ nkwari akụ Centara na Laos ruru anọ na Centara Plumeria Resort Pakse nke amalitelarị mmepe ma hazie imeghe na 2020.
Oplọ nkwalite Hotel: DoubleTree nke Hilton Shanghai Nanxiang
National Sea Simulator: olile anya ohuru maka ahihia coral siri ike